Ihe mgbaàmà nke ime afọ site n'izu, Ọchịchọ ime nwa, Vidio
Ihe omumu ime
Ọrịa afọ 2
Ọrịa afọ 8
Ọrịa afọ 12
Ọrịa afọ 16
Ime afọ Q na A
Jụọ a Question
Calculator ime nwa
Izu Ogwu Mgba Oria Izu
Calculator ime na afọ ojuju
Welcome na ụwa nke afọ ime! Anyị na-ekwu ya site n'ịmụmụ ọnụ ọchị n'ihi na ọ bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ihe ị ga-eji mee n'oge ime ime kwa izu. Ime ime nwere ike ịbụ oge kachasị mma na ndụ nwanyị, ma ọ jupụtara ajụjụ na nchegbu. Dika ime di na-amalite, o nwere ike ị gaghị ama ihe ị ga-atụ anya kwa izu ma chọpụta ihe gbasara mgbaàmà ime ime kwa izu. Anyị nwere ike inyere aka.
Maka ndị na-eche banyere ụbọchị ị ga-agbaso, anyị na-enye ya nwa onu ogugu di ime site na oge ruru, nke na-enyere ọtụtụ aka. Anyị na-enyekwa ntụziaka maka otu esi agbakọ ụbọchị gị. Lelee azụ mgbe niile ka ị mara ihe gbasara mgbaàmà ime afọ gị. Gaa na Q na ngalaba iji jụọ ajụjụ ma gụọ azịza ya. Mee ka anyị na-ejigide gị n'oge ime gị kwa izu. Ị na-ahụ ihe ịrịba ama nkịtị, ihe ọjọọ? Ihe ọ bụla na-akpata nchegbu banyere afọ ime ọhụrụ gị? Anyị abụghị Dr ma mana ozi anyị nwere ike inyere aka. Anyị nwere ike inyere aka chọpụta ma ọ bụrụ na ime afọ ime gị kwa izu bụ ihe kwesịrị ekwesị n'oge ị nọ n'afọ ime. Ọzọ, ọ dị mma mgbe ị maara ihe ị ga-atụ anya kwa izu. Anyị na-enye ozi n'izu site n'izu, malite na ụbọchị mgbaàmà ime afọ 1. Kedu ihe mgbaàmà ime n'afọ site n'izu 2, site n'izu 5, wdg. E nwere otu izu n'izu n'iji ihe omimi ime, tinyere kalenda iji lelee ahụ gị na nwa gị site na nke a dị ịrịba ama
Nne Ime Ihe Nkiri
Izu 1 -Izu 2 -Izu 3 – Izu 4 -Izu 5 – Izu 6 – Izu 7-Izu 8 -Izu 9 – Izu 10 – Izu 11 -Izu 12 – Izu 13 – Izu 14 – Izu 15 -Izu 16 – Izu 17 – Izu 18 -Izu 19 -Izu 20 – Izu 21 – Izu 22 -Izu 23 – Izu 24 – Izu 25 Izu 26 -Izu 27 – Izu 28 – Izu 29 – Izu 30 – Izu 31 -Izu 32 – Izu 33 – Izu 34 – Izu 35 -Izu 36 – Izu 37 - Izu 38 – Izu 39 – Izu 40
Ebe anyị nwere ike, anyị na-enye ihe dị mkpa afọ ime nakwa. Anyị na-elekwasị anya karịsịa maka ozi metụtara ahụike na inye ndụmọdụ na ime ndụmọdụ ime n'afọ mgbe ị na-atụrụ ime kwa izu, dika vidiyo njikọ n'elu. A na-ewetara gị ya Ahịa Health Digest. Anyị na-agbasawanye, ma vidio ahụ gbakwunyere na peeji nke na-ekwu banyere ịzụ ahịa nwa. Anyị ga-agbakwụnye posts mgbe niile maka ịzụ ahịa maka nwa, akwụkwọ ndekọ onyinye, ọbụna echiche ntanetụ.
Ma, ebe nrụọrụ weebụ ọzọ ọ dị mkpa maka ozi ndị ọzọ banyere afọ ime? Anyị na-eche otú ahụ! Maka otu, onye na-atụle ime afọ ga-enyere aka gbakọọ ụbọchị gị. O nwere ike ịbụ na ị nwere ajụjụ mbụ n'isiokwu a: Gịnị bụ mgbaàmà ime afọ ọ bụla n'izu? Kedu ihe ụfọdụ dị n'oge ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị banyere ịtụrụ ime? Kedu ka m si mata ma m dị ime, ma ọ bụ na ule dị n'ime ime ezi, ma ọ bụ otu esi ahọrọ na obstetrician. Ma eleghị anya ị nwere ajụjụ gbasara STDs na afọ ime ma ọ bụ ime ihe mgbe ị ka dị ime. Kedu izu dị iche iche, na mgbaàmà ime n'afọ site na izu n'oge ọ bụla. Eleghị anya ị na-eche banyere inye nri ara, usoro nwa ọhụrụ, wdg. Site na onye mgbakọ afọ ime na ozi ndị ọzọ na saịtị anyị, Ime afọ site n'izu, anyị na-achọ ịza ajụjụ ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ! Anyị na-ekpuchi afọ ime gị na linear, ụdị ejiji oge, n'oge ị na-atụrụ ime kwa izu, na-abụrụ ọnwa atọ. Ọbụna anyị na-ekpuchi gị ihu na ozi na ndụmọdụ tupu ime ime, ihe ị ga-atụle tupu i tụọ ime. Anyị na-aga n'ihu, na-ekwurịta banyere nnyefe na ịzụ nwa dị mma n'ụwa taa. Site na mmepe na-aga n'ihu, onye na-eme afọ izu ga-ezite ezi ozi. Ị ga-enwe ike ịchọ ya site na ụbọchị nke oge ikpeazu gi yana ụbọchị ime gị. A ga-enwe usoro dịkwuo ogologo iji gbakọọ mgbaàmà ime afọ gị na izu.
Dị ka anyị kwuru na anyị ga-agbakwụnye posts mgbe nile banyere ịzụ ahịa maka nwa, ndekọ ego, ọbụna ihe ntanye nke ịsa ahụ. Nọrọ na-ekiri! Ọ dịghị ihe na-atụle na ọrụ ebube na anwansi nke ime. ọ bụ ohere gị itinye aka na ndụ kachasị mma nke ndụ. Ime atụmatụ maka ahụmahụ a nwere ike imeziwanye ohere ịmere gị na nwa gị. Ọ nwere ike inyere aka ịchọpụta ma ọ bụ belata ụfọdụ mgbaàmà ime ime. Ụzọ ndụ gị na-emetụta ahụ ike nke nwa gị, ma ọ pụkwara imetụta gị mgbaàmà afọ ime kwa izu. Site na ime atụmatụ maka ime ime gị kwa izu, ị na-eme ka ị hụ na gị na nwa gị na-ekpughe ezi ihe ma zere ihe ndị na-emerụ ahụ mgbe ị dị ime. Site na mgbe ọtụtụ ndị inyom ghọtara na ha dị ime, ha bụ otu n'ime ọnwa abụọ n'ime afọ ime ha. Site na oge ha na-ahụ dọkịta ha, ha dị ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ. Ọ bụ nke ahụ mere mgbaàmà ime afọ imechi site na izu bụ isi. Ụbọchị 12 mbụ nke afọ ime dị oke mkpa n'ihi na nke a bụ mgbe nwa ahụ na-etolite usoro ihe omume ya. Ọtụtụ ihe dị mkpa nwere ike ime tupu ị ghọta na ị dị ime ma ọ bụ hụ dọkịta gị. Ịdị na-emetụta ime nwa pụtara nkwadebe anụ ahụ na nke uche. Ị ga-enwe mgbanwe dị ukwuu n'oge ị dị ime. Inwe ezi ahụike zuru oke tupu ịtụrụ ime nwere ike inyere gị aka ịnagide nrụgide anụ ahụ na mmetụta uche nke ịtụrụ ime, ọrụ na nnyefe. Ọ ga - enyere gị aka ịkwadebe ịzụ nwa ọhụrụ a. Anyị na-enyere gị aka ịmata mgbaàmà ime afọ ime gị na izu. Site na onye onu ogugu ime afo na ihe omuma banyere ya, ị ga-edozi.
Lelee saịtị anyị na asụsụ dị iche iche, na-eji igodo na elu aka nri. Ọzọkwa, biko nweere onwe gị ịza ajụjụ banyere afọ ime gị kwa izu, mgbaàmà, ahụmahụ, wdg. Bịa n'oge na-adịghị anya!
Categories Họrọ Atiya Ọrịa afọ 12 Mgbaàmà Ọrịa afọ 16 Ọrịa afọ 18 Mgbaàmà Ọrịa afọ 2 Mgbaàmà Ọrịa afọ 8 Ịmalite ime afọ Ihe mmalite nke afọ ime Ahụ ike Mgbaju afọ Ọrịa Morning Pregnancy Ịgba Ọkụ Ihe mgbaàmà afọ ime Afọ Ime Ime Ogologo Ogologo Izu Ọrịa Tubal
Anyị abụghị ndị dọkịta na ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ a abụghị ndụmọdụ ahụike. Anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ozi ziri ezi ma anyị enweghị nkwa. Anyị na-agba gị ume ịchọta ndụmọdụ ahụike bara uru site na dọkịta ma ọ bụ OBGYN.
Ime afọ site n'izu
Daalụ maka ịlele nyocha blog site na Izu. Isiokwu nke saịtị ahụ bụ ime ime kwa izu. Anyị na-enye mgbaàmà ime afọ kwa izu, na ozi metụtara ya, malite site na ime ime n'oge site na nnyefe.
Afọ Iju Afọ Nzuzo 40
Afọ Iju Afọ Nzuzo 39
Afọ Iju Afọ Nzuzo 38
Afọ Iju Afọ Nzuzo 37
Afọ Iju Afọ Nzuzo 36
Copyright © Ikike niile echekwabara. Nkwuputa: Anyị abụghị ndị dọkịta na ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ a abụghị ndụmọdụ ahụike. Anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ozi ziri ezi ma anyị enweghị nkwa. Anyị na-agba gị ume ịchọta ndụmọdụ ahụike bara uru site na dọkịta ma ọ bụ OBGYN.